Ikhaya STARS E-EUROPE I-Joao Cancelo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Joao Cancelo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Ikhredithi ku-TheMirror
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Yombono weBhola ngesiteketiso "I-Gypsy". Indaba yethu yeJoao Cancelo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe esemncane, isizinda somndeni, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni, indlela yokuphila namanye amaqiniso amancane - aziwayo ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngejubane lakhe, amandla namakhono ahlaselayo. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka iJoao Cancelo's Biography ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, João Pedro Cavaco Cancelo wazalwa ngosuku lwe-27th ngoMeyi 1994 eBarreiro eSetúbal, ePortugal. Ubengomunye wezingane ezimbili azalwa ngunina, uFilomena noyise uJoseph.
UJoao Cancelo wazalelwa abazali abazali abaziwa kancane ngaye. Ama-Image Credits: FPCP ne-PXhere.
Isizwe samaPutukezi sobuzwe abamhlophe abanezimpande zaseYurophu sakhuliselwa endaweni yakhe yokuzalelwa eBarreiro eSetubal, ePortugal lapho akhulela khona kanye nomfowabo omncane owaziwa ngokuthi uPedro.
UJoao Cancelo wakhulela eBarreriro eSetubal, ePortugal. Ama-Credits Wezithombe: FPCP kanye I-WorldAtlas.
Ukukhula ezweni lakubo, uCancelo osemncane wayeyingxenye yezingane ezazinikela kulo mdlalo omnandi kodwa ongahlelekile webhola lomgwaqo ngaphambi kokuba ajoyine iqembu lendawo - iBarreirense lapho ayenambitha wakhe wokuqala webhola lokuncintisana.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngesikhathi uCanecelo eseneminyaka eyi-13, wayesezimisele kakhulu ngokudlala ibhola lekilabhu yakhe yokuba ngumfana - iBarreirense - futhi futhi wayenamakhono amakhulu amveza njengomvikeli ovuthiwe onamathemba amakhulu.
UJoao Cancelo obenesithombe nabalingani beqembu lakhe lekilabhu yakhe yobusha - uBarreirense. Isikweletu Sezithombe: FPCP.
Ikhono lobuchwepheshe bebhola lezinyawo lasheshe laziswa ngabakwaBenfica abamenze wasayinwa esikoleni sabo e2007. Waqala kanjalo-ke umsebenzi kaCancelo ngokwakha i-'The Eagles 'eyathuthukisa amandla akhe ezikhundleni zombili zesokunxele nakwesobunxele.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
UCancelo uqophe ukunyuka okuthe xaxa ezinhlwini zezinhlelo zentsha yeBenfica futhi wenza ukungahambisani kwakhe nokuncintisana neqembu lokuqala lekilabhu ngesikhathi sokuhlangana kwabo ngobumnandi noGil Vicente kwi-28th kaJulayi 2012.
Emuva kokuzama ukwenza umsebenzi waphambilini wabona uCancelo eqhubeka nokuzibandakanya kwakhe neB-Benfica's B lapho afaka khona isandla sakhe ekusizeni iqembu linqobe iNdebe Yomhlaba eyaziwa ngokuthi umpetha kazwelonke.
Isithombe esingajwayelekile sikaJoao Cancelo phakathi nezinsuku zakhe noBenfica's B-Side. Isikweletu Sezithombe: I-Youtube.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
Ngaphambi kokuthi uCancelo agcine enza udweshu wakhe wokuncintisana neqembu lokuqala likaBenfica, umhlaba wakhe washaqeka ngokufa kukanina uFilomena engozini yemoto naye abe nengxenye kuyo. Lowo owayeneminyaka eyi-18 nomfowabo uPedro babese-Audi I-A3 eqhutshwa ngunina ophose ikhanda lomndeni - uJoseph - esikhumulweni sezindiza iLisbon Portela.
Ukubuyela emuva, imoto yabo ibandakanyeke engozini eyashiya uFilomena efile ngenkathi uCancelo noPedro belimele kabi. Yize kwakubuhlungu futhi kudabukisa kakhulu, uCancelo uthathe ukulahlekelwa ngumama wakhe njengebutho lokuqhuba ukuze aphumelele. Ngenxa yalokho, wagcina etholile imali yakhe yokuqala yokuncintisana neBenfica ngokumelene noGil Vicente ngoJanuwari 2014 futhi waqhubeka nokwenza intombi yakhe ibonakale ePrinceira Liga.
UJoao Cancelo wayeneminyaka engu-18 ubudala ngenkathi kushonelwa umama wakhe engozini yomgwaqo. Isikweletu Sezithombe: Ilanga.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Ezinyangeni ngokuhamba kwesikhathi ngo-Agasti 2014, uCancelo wajoyina iValencia kwisivumelwano sokubolekwa kwemali esihambisana nenkontileka engapheli. Ngenkathi eseceleni kweSpain, uCancelo waboniswa emidlalweni ye-UEFA Champions League ngaphambi kokujoyina i-Inter Milan lapho aqhubekela phambili nomsebenzi wakhe.
Ngokushesha phambili kuze kube manje, uCancelo ungumdlali osunguliwe weManchester City - ikilabhu alijoyina ngosuku lwe-7th ka-Agasti 2019 - ngemuva kokuqopha umlando ukuphumelela kuJuventus FC kubandakanya nokuwina iziqu zeSupercoppa Italiana neSerie A.
UJoao Cancelo uwine iSerie - Isihloko neJuventus ngaphambi kokujoyina iManchester City. Isikweletu Sezithombe: Pinterest.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
UJoao Cancelo usazoshada ngesikhathi sokubhala. Sikulethela amaqiniso ngomlando wakhe wokuthandana nesimo sobudlelwano bamanje. Okokuqala, uCancelo akaziwa ukuthi wayethandana nomuntu wesifazane ngaphambi kokuba ahlangane nentombi yakhe uDaniela Machado.
UJoao Cancelo nentombi yakhe uDaniela Machado. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Izinduna zothando ezihlangane e2017 ngenkathi uCancelo esadlalela i-Inter Milan bezingahlukani kusukela lapho. Lo owazalelwa e-Italy akagcini nje ngokuthandwa uCancelo kodwa uthandwa ngabathandi baseManchester City abamamukele ngezandla ezifudumele emgomeni weligi.
Yize uCancelo noDaniela belindele ukuzalwa kwengane yabo yokuqala ngesikhathi sokubhala, kukholakala ukuthi unendodana encane eyaziwayo ngemuva kokufaka isithombe se-Instagram nesihloko esithi 'Ingane yami 🌟❤️'.
UJoao Cancelo nendodana yakhe. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
UJoao Cancelo uvela kwimvelaphi yomndeni osezingeni eliphakathi. Sikulethela amaqiniso ngokuphila komndeni wakhe.
Mayelana nobaba kaJoao Cancelo: UCancelo unobaba okhonjwa njengoJoseph. Umvikeli useduze nobaba wakhe abevame ukumkhumbuza ukuthi aqaphele ukuphumelela kwakhe ebholeni. Yize ekuqaleni uJoseph ayengamthathi kancane uCancelo, wamxhasa kanti manje uphila ngokubungaza impumelelo yakhe.
Mayelana nomama kaJoao Cancelo: Umama kaCancelo kwakunguFilomena. Kwakuyimpikiswano ebaluleke kunazo zonke empilweni kaCancelo njengoba emthembisa ukuthi uyamhambisa ezokuziqeqesha nasemidlalweni nokuba ngumlandeli wakhe omkhulu kunabo bonke. Akumangalisi ukuthi ukushona kwakhe e2013 kubone umhlaba kaCancelo usuphela njengoba elilela ukulahleka okungenakulungiswa. Ukulahlekelwa ngumama wakhe engozini yemoto ebuhlungu yikhona okwenze ukuthi lo mkhuba aphumelele (Ilanga Bika).
UJoao Cancelo wakhuliswa ngabazali abangisekelayo futhi okuncane okwaziwayo ngaye. Isikweletu Sezithombe: ClipArtStudio kanye ne-CelebrityUnfold.
Mayelana nomfowabo kaJoao Cancelo: UCancelo akanabo odade kodwa ngumfowethu ophendula igama elithi Pedro. Kuncane okwaziwayo mayelana nengane yakudala ngesikhathi kubhalwa njengoba uCancelo engasazivezi lutho ngaye.
Mayelana nezihlobo zikaJoao Cancelo: Kude nomndeni wakubo kaCancelo, uLittle uyaziwa ngogogo nomkhulu wakhe kanye nogogo nomkhulu wakhe. Ngokunjalo, awkho amarekhodi obabekazi kaCancelo, umalume, umshana kanye nomshana wakhe ngenkathi umzala wakhe engatholakalanga ezenzakalweni zobudala bakhe esemncane kuze kube manje.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Yini eyenza uJoao Cancelo abeke umkhaza? Hlala emuva njengoba sikulethela ukwenziwa kobuntu bakhe ukuze sikusize uthole isithombe esiphelele ngaye. Okokuqala, i-Cancelo's Persona iyinhlanganisela yezimpawu ze-zodiac zeGemini.
Uyashukunyiswa, ngokomoya nangokwemboni eveza imininingwane ngempilo yakhe yangasese neyangasese. Izintshisakalo zakhe nezinto zokuzilibazisa kufaka phakathi ukuhamba, ukubhukuda nokuchitha isikhathi esihle nabangane nomndeni.
Ukuhamba kungenye yeJoao Cancelo Hobbies. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Inani likaJoao Cancelo lisabhekwa, noma kunjalo, unenani lentengiso lempahla engu- € 55,00 Million ngaleso sikhathi sokubhala. Umsuka womcebo wakhe omncane owaziwayo uvela kakhulu ekusetshenzisweni kwebhola lakhe ngenkathi ehlaziya izindlela zakhe zokusebenzisa imali eveza ukuthi uphila impilo kanokusho.
Yize inani leqiniso lempahla yakhe efana nendlu nezimoto lisazokwaziwa, akukho okuphikayo iqiniso lokuthi uphila njengenkosi futhi unikeza abalandeli umbono onjalo wendlela yokuphila ngokuhlanganyela izithombe ezimthwebula ukuthi abe nezikhathi ezimnandi ezindaweni zokungcebeleka ezibizayo ezungeze leyo umhlaba.
UJoao Cancelo ube nesikhathi esihle endaweni ebabazekayo ebizayo. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Amaqiniso weJoao Cancelo Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukugoqa indaba yethu yobuntwana yaseJoao Cancelo kanye ne-biography lapha kukhona amaqiniso angafakiwe kwi-bio yakhe.
UCancelo wabizwa ngegama elithi "Gypsy" ngenxa yobukhazikhazi bakhe obumnyama nobunzima bezithombe njalo lapho elahlekelwa yimidlalo.
Noma nini lapho uCancelo egibela khona ethambekini unikezela ukusebenza kwakhe kumama wakhe wefilmena osekupheleni.
UJoao Cancelo unikezela ngamunye umdlalo wakhe wokudlala kumama wakhe ongasekho ngaphambi kokuqala kokudlala. Isikweletu Sezithombe: Ilanga.
UCancelo akaze abonwe ebhema ngesikhathi sokubhala. Kodwa-ke, uphuza ngokulinganisela.
Umvikeli unezimpawu zombili ezingalweni zombili engalweni yakhe yangakwesobunxele ekhombisa lokho okubonakala njengesithombe sikamama wakhe ongasekho uFilomena.
UJoao Cancelo une-tattoo kamama wakhe engalweni yakhe ephezulu kwesobunxele. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Ngokuphathelene nenkolo yakhe, uCancelo wazalwa futhi wakhula njengomKristu. Kodwa-ke, usazokwazisa isikhundla sakhe ezindabeni zokholo.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Joao Cancelo Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Ama-Oleksandr Zinchenko Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso
vannyhenrico - January 19, 2020
vannyhenrico - January 19, 2020 0
UJuan Cuadrado Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-Brahim Diaz Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
UBernardo Silva Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts